Custom synthesis and contract R & D Apicmo cdmo Manufacturers
Our Services > Chirongwa chekutanga uye chibvumirano R & D
Shanduro yakakura-kubva kubva magiramu kusvika kuMetric Tones
Kunyanya kana zvichidiwa
Chirongwa chekuongorora zvakazara kusanganisira HPLC, GC-MS uye NMR
Nokuda kwezvikwereti uko kugadzirwa kwekugadzira kwatovepo, APICMO inogona kupa chibvumirano uye mafeji ekugadzira mapepa kumitemo yemutengi. Mukuwedzera kune mazano ataurwa pamusoro apa, tinopawo nyanzvi yekugadzirwa kwezvinhu zvakasvibiswa (pasina mari yakawedzerwa) kuti tive nechokwadi chokuti, pose pazvinogoneka, isu chete tinoshandisa zvitubu zvezvinhu zvakanakisa zvezvinhu mumakwikwi emakwikwi emakwikwi.
APICMO inokwanisawo kugovera tsvakurudzo yemhando yekutsvakurudza uye yekusimudzira yakakonzerwa nevatengi 'zvavanoda. Tine nhoroondo yakanakisisa yekugadzirisa zvinetso zvakakosha zvinokonzerwa nevatengi vedu uye mapurojekiti zvingave zvichienderana nehuwandu hwenguva yakazara (FTE) kana mazuva ose. Taura nesu kuti tibvunze kuti isu rudzi rwedu R & D rune unyanzvi ringaita sei purojekiti yako inotevera kubudirira kwedu kwezvino.